Ukudalwa kweMuck in Cocoa Beach, Case Credging Case Study
Cocoa Beach, eFlorida
Source: I-Florida Namuhla
I-Central Sands isebenzisa uhlobo lwe-Ellicott® Ukugujwa kwesitebhisi seSwinging ukuletha ingqophamlando kuleli sonto ekwelapheni i-Indian River Lagoon, ukuncela amashumi eminyaka kamayenabukeni onjenge-mayonesi ovela emgodini weCocaoa Beach.
NgoLwesine, ukuqalwa phansi kwaqala njengoba abasebenzi beqala ukukhipha imbumbulu eyakhiwe emgqonyeni womfula iBanana River Lagoon.
Iphrojekthi engu- $ 2 million ifaka ukuvala umsele weJack / Kent ukusuka ku-8 am uye ku-5 pm ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu emasontweni amane kuya kwayisithupha, ngokusho koMnyango Wezokuphatha Imithombo Yezemvelo eBrevard County.
Isigaba sokuqala sokudonswa kwezinkomo siqale enyakatho yeCocoa Beach emgqonyeni phakathi kukaJack Drive noKent Dr.
Iphrojekthi izothuthuka ngaseningizimu, ikhiphe eminye imisele emihlanu.
ICentral Sand Inc., eseBrevard County, izokhipha amawadi ama-cubic e-83,000 ama-muck kusuka emiseleni eyisithupha, ibeke impango kumahektare we-10 womhlaba ophethwe idolobha ngasenyakatho yeBluewaters Drive.
Ukusuka lapho, ngemuva kokuxazululeka komgwaqo, kuzothunyelwa ngamaloli endaweni eyihlala khona eduze kwe-Space Coast Regional Airport e-Titusville.
Le projekthi iwumsebenzi ohlanganyelwe nedolobha laseCocaoa Beach.
Imuck - into ebolile yezitshalo, ubumba nenhlabathi evela ezindaweni zokwakha - ifaniswe "nemayonnaise emnyama." Kuvimba ukukhanya kwelanga otshanini basolwandle futhi kuneqhaza ekubola kwamagciwane, okudla umoya-mpilo emanzini, kubangele ukubulawa kwezinhlanzi.
"Umsele ngamunye uzothatha cishe amasonto amathathu (ukudonswa)," kusho uMatt Culver, ongumxhumanisi wohlelo lokuhamba ngesikebhe kanye nemigwaqo yamanzi.
Izakhamizi ezihlala eningizimu yeBluewaters Drive kufanele zilindele ukugcwala kwamaloli nothuli, kusho izikhulu.
"Sizama konke okusemandleni ukunciphisa ukuthinteka kwabo," kusho uWayne Carragino, umphathi wephrojekthi wedolobha.
"Izobuyiselwa esimweni sayo sokuqala uma isiqediwe," esho ngendawo yokuchitha impahla.
Le projekthi ingenye yamaphrojekthi we-dredging amahlanu azosusa ama-cubic yards we-1.4 ahlanganisiwe wasendaweni yesichibi, i-muck eyanele ukugcwalisa ichibi lokubhukuda elilingana ne-Olimpiki cishe ngezikhathi ze-437.
Ipayipi elingamasentimitha ayisishiyagalombili liletha i-sludge ukusuka dredge iye endaweni yokubamba lapho
ama-solids ahlala futhi amanzi ayahlungwa ngaphambi kokuba abuyele elondolo.
Abameli beLagoon banethemba lokuthi lokho kuzosiza ekuqedeni ukwelashwa kwamachweba agula kusukela eminyakeni yokuqhakaza kwe-algae. “Ukuqhuma okukhulu” kwe-algae eluhlaza ngo-2011 kanye nokuqhakaza okuluhlaza okwalandela kwabulala amaphesenti angama-60 otshani basolwandle lwachibi, okuyi-barometer yezempilo yemvelo yomfula. Amakhulu ama-manatee, amahlengethwa nama-pelican nawo afa ngemuva kokuqhakaza.
E-2014 nase-2015 iSishayamthetho saseFlorida sabela isigidi esihlanganisiwe sama- $ 20 ayisigidi ekufinyeleleni kabusha izingosi ezinhlanu: umlomo weTurkey Creek ePalm Bay; imisele emigudwini yeSykes Creek naseC Cocoa Beach; imifudlana i-Grand Canal nehambisana nayo ku-Satellite Beach; kanye namanzi eduze kweJones Road ramp isikebhe eMims.
Ukuxhaswa ngemali kufaka phakathi u- $ 2.5 wezigidi kuFlorida Institute of Technology ukuyofunda ngaphambi nangemva kwephrojekthi yokudonsela phansi eTurkey Creek ukukala izinzuzo zemvelo.
Iphrojekthi yeTurkey Creek kulindeleke ukuthi iqale maphakathi noFebhuwari. Iziphathimandla zinethemba lokuphothula iphrojekthi ngoMeyi lapho imithetho yezemvelo ivimba ukwehla ngenxa yama manatees emfuleni.
Ukuhlunga kwamanzi ngokusebenzisa i-wier ngemuva kokuhlala okugcwele endaweni enkulu yokubamba.
I-Ellicott® Swinging Ladder dredge enyakatho yeCocoa Beach
Abameli beLagoon banethemba lokuthi lokho kuzosiza ekuqedeni ukwelashwa kwamachweba agula kusukela eminyakeni yokuqhakaza kwe-algae. “I-superbloom” yobulembu obuluhlaza ngo-2011 kanye nezimbali eziqhakazile ezinsundu ezalandela kwabulala amaphesenti angama-60 otshani basolwandle lwachibi, okuyi-barometer yezempilo yemvelo yomfula. Amakhulu ama-manatee, amahlengethwa nama-pelican nawo ashonele ngemuva kokuqhakaza.
Uxhaso lubandakanya u- $ 2.5 wezigidi kuFlorida Institute of Technology ukutadisha ngaphambi nangemva kwephrojekthi yokwakhiwa kabusha eTurkey Creek ukukala izinzuzo zemvelo.
Qiniseka ukuthi uyayibona ividiyo.
Ishicilelwe kabusha kusuka I-Florida Namuhla